यूहन्ना १२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१२ तब निस्तार-चाड सुरु हुनुभन्दा छ दिनअघि येशू बेथानी आइपुग्नुभयो। येशूले मृत्युबाट ब्यूँताउनुभएका लाजरस यहींका थिए। २ त्यसैले तिनीहरूले त्यहाँ उहाँको लागि साँझको भोज लगाए; मार्था सेवा-टहल गरिरहेकी थिइन्‌ र लाजरसचाहिं उहाँसित टेबुलमा खान बसिरहेका अरू मानिसहरूसित थिए। ३ तब मरियमले आधा लिटरजति सक्कली अनि असाध्यै महँगो सुगन्धित जटामसीको तेल ल्याएर येशूको पाउमा दलिदिइन्‌ र आफ्नो केशले उहाँको पाउ पुछिन्‌। अनि पूरै घर सुगन्धित तेलको मगमग बास्नाले भरियो। ४ तर उहाँका चेलाहरूमध्ये एक जना, यहूदा इस्करियोत, जसले उहाँलाई धोका दिन आँटेका थिए, तिनले भने: ५ “यो सुगन्धित तेल तीन सय दिनारमा* बेचेर गरिबहरूलाई किन दिइएन?” ६ तिनले गरिबहरूको चिन्ता गरेर यसो भनेका थिएनन्‌, तर तिनी चोर थिए। तिनले कन्तुर बोक्ने गर्थे र त्यसमा राखिएको पैसा चोर्थे। ७ त्यसैले येशूले भन्नुभयो: “भैगो, छोडिदेओ, मेरो लास गाड्ने दिनमा पूरा गर्नुपर्ने यो परम्परा तिनलाई पालन गर्न देओ। ८ गरिबहरू त तिमीहरूसित सधैंभरि हुन्छन्‌ तर म भने तिमीहरूसित सधैंभरि हुँदिनँ।” ९ उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर यहूदीहरूको ठूलो भीडले थाह पायो अनि तिनीहरू येशूको कारणले गर्दा मात्र होइन तर उहाँले मृत्युबाट ब्यूँताउनुभएका लाजरसलाई हेर्न पनि गएका थिए। १० त्यसैले मुख्य पुजारीहरूले लाजरसलाई पनि मार्ने मतो गरे, ११ किनभने तिनकै कारणले गर्दा यहूदीहरूमध्ये धेरै जना त्यहाँ गएका थिए अनि तिनीहरूले येशूमाथि विश्वास गर्न थालेका थिए। १२ यसको भोलिपल्ट जब चाडको लागि आएको ठूलो भीडले येशू यरूशलेम आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो, १३ तब तिनीहरूले खजूरका हाँगाहरू लिए अनि उहाँलाई भेट्न गए। त्यसपछि तिनीहरू यसो भन्दै जयजयकार गर्न थाले: “तपाईंको जय होस्! यहोवाको नाममा आउने इस्राएलका राजा धन्यका हुन्‌!” १४ तर येशूले एउटा पाजी भेट्टाएपछि उहाँ त्यसमाथि चढ्नुभयो, जस्तो लेखिएको छ: १५ “हे सियोनकी छोरी, नडराऊ! हेर, तिम्रो राजा पाजीमाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ।” १६ यी कुराहरू पहिले उहाँका चेलाहरूले यादै गरेका थिएनन्‌ तर जब येशू गौरवान्वित हुनुभयो, तब उहाँको विषयमा यी कुराहरू लेखिएको भएर नै भीडले उहाँलाई त्यसो गरेको रहेछ भनेर चेलाहरूले सम्झे। १७ उहाँले लाजरसलाई चिहानबाट बाहिर बोलाएर तिनलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुहुँदा उहाँसँगै भएको भीडले यस विषयमा साक्षी दिइरह्यो। १८ उहाँले यो चमत्कार गर्नुभएको थियो भनी जब भीडले सुन्यो, तब तिनीहरू पनि उहाँलाई भेट्न आए। १९ तब फरिसीहरू आपसमा भन्न थाले: “देख्यौ, तिमीहरूले केही गर्न सकेनौ। हेर त, सारा संसार उसको पछि लागिसक्यो!” २० अब चाडको बेला उपासना गर्न आउनेहरूमध्ये केही ग्रीकहरू पनि थिए। २१ त्यसैले यिनीहरू फिलिपकहाँ आए, जो गालीलको बेथसेदाका थिए र उनीहरूले तिनलाई यसो भन्दै बिन्ती गर्न लागे: “हजुर, हामी येशूलाई भेट्न चाहन्छौं।” २२ तब फिलिप आए र अन्द्रियासलाई भने। त्यसपछि अन्द्रियास र फिलिप गए अनि येशूलाई भने। २३ तर येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिंदै यसो भन्नुभयो: “मानिसको छोरा गौरवान्वित हुने बेला आइपुगेको छ। २४ तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, जमिनमा खसेर नमरुन्जेल गहुँको एउटा गेडा एउटै मात्र रहन्छ; तर त्यो मऱ्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। २५ जसले आफ्नो ज्यानलाई* प्यारो ठान्छ, उसले त्यो नाश गर्छ तर जसले यस संसारमा आफ्नो ज्यानलाई घृणा गर्छ, उसले अनन्त जीवनको लागि त्यसको रक्षा गर्नेछ। २६ यदि कोही मेरो सेवा गर्न चाहन्छ भने ऊ मेरो पछि लागोस् अनि म जहाँ हुन्छु, मेरो सेवक पनि त्यहीं हुनेछ। यदि कोही मेरो सेवा गर्न चाहन्छ भने मेरो बुबाले उसको आदर गर्नुहुनेछ। २७ अब म विचलित भएको छु, त्यसैले म के भनूँ? हे बुबा, यस घडीबाट मलाई जोगाउनुहोस्। तर यसैको लागि म यस घडीसम्म आइपुगेको हुँ। २८ हे बुबा, तपाईंको नाम महिमित पार्नुहोस्।” तब आकाशबाट एउटा आवाज आयो: “मैले महिमित पारेको छु र फेरि पनि महिमित पार्नेछु।” २९ यसैले वरपर उभिरहेको भीडले जब यो आवाज सुन्यो, तब तिनीहरूले मेघ गर्जिएको हो भन्न थाले। अरूले भने यसो भन्न लागे: “स्वर्गदूतले उहाँसित कुरा गरेको हो।” ३० येशूले भन्नुभयो: “यो आवाज मेरो लागि होइन, तर तिमीहरूका लागि आएको हो। ३१ अहिले यस संसारको न्याय हुँदैछ; अब यस संसारको शासक बाहिर फ्याँकिनेछ। ३२ तर जहाँसम्म मेरो कुरा छ, जब म पृथ्वीबाट माथि उचालिन्छु, तब हर किसिमका मानिसहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नेछु।” ३३ आफूले कस्तो प्रकारको मृत्यु भोग्न लागेको छु भनी देखाउन उहाँले वास्तवमा यी कुराहरू भनिरहनुभएको थियो। ३४ यसैले भीडले उहाँलाई जवाफ दियो: “ख्रीष्ट सधैंभरि रहिरहनुहुन्छ भनेर हामीले मोशाको व्यवस्थाबाट सुनेका थियौं; तर तपाईंचाहिं मानिसको छोरा माथि उचालिनुपर्छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? यो मानिसको छोरा को हो?” ३५ तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूमाझ अब अलिक बेरसम्म ज्योति रहनेछ। ज्योति छउन्जेल तिमीहरू त्यसैमा हिंड, ताकि अन्धकारले तिमीहरूलाई नछोपोस्; जो अन्धकारमा हिंड्छ, उसलाई आफू कहाँ जाँदैछु भनेर थाह हुँदैन। ३६ तिमीहरूसित ज्योति छँदै ज्योतिमा विश्वास गर अनि तिमीहरू ज्योतिका सन्तान बन्न सक्नेछौ।” यी कुराहरू भनेपछि येशू जानुभयो र तिनीहरूबाट लुक्नुभयो। ३७ उहाँले तिनीहरूको अगाडि धेरै चमत्कार गरिसक्नुभएको भए तापनि तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेनन्‌। ३८ यसैकारण भविष्यवक्ता यशैयाको यो वचन पूरा भयो: “हे यहोवा, हामीले सुनेको कुरामा कसले विश्वास गरेको छ? अनि यहोवाले आफ्नो बाहुबल कसलाई प्रकट गर्नुभएको छ?” ३९ तिनीहरूले विश्वास गर्न नसक्नुको कारणबारे यशैयाले फेरि भने: ४० “उहाँले तिनीहरूको आँखा बन्द गरिदिनुभएको छ र उहाँले तिनीहरूको मन कठोर बनाइदिनुभएको छ, ताकि तिनीहरूले आफ्नो आँखाले नदेखून्‌ र आफ्नो मनले नबुझून्‌ अनि मतिर फर्केर नआऊन्‌ र मैले तिनीहरूलाई निको पार्न नपरोस्।” ४१ यशैयाले यी कुराहरू भने, किनकि तिनले ख्रीष्टको गौरव देखेका थिए अनि उहाँको विषयमा बताएका थिए। ४२ वास्तवमा, शासकहरूमध्ये* धेरै जनाले उहाँमाथि विश्वास गर्थे तर सभाघरबाट निष्कासित हुन नपरोस् भनेर फरिसीहरूको डरले गर्दा उहाँलाई खुलेआम स्वीकार्दैनथे; ४३ किनकि तिनीहरू परमेश्वरबाट पाउने प्रशंसाभन्दा मानिसहरूबाट पाउने प्रशंसा बढी मन पराउँथे। ४४ तथापि, येशूले ठूलो सोरमा भन्नुभयो: “जसले ममाथि विश्वास गर्छ, उसले ममाथि मात्र होइन तर मलाई पठाउनुहुनेमाथि पनि विश्वास गर्छ; ४५ अनि जसले मलाई देख्छ, उसले मलाई पठाउनुहुनेलाई पनि देख्छ। ४६ म यस संसारमा ज्योति बनेर आएको छु, ताकि ज-जसले ममाथि विश्वास गर्छन्‌, तिनीहरू अन्धकारमा रहिरहन नपरोस्। ४७ तर यदि कसैले मेरो वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने म उसको न्याय गर्दिनँ; किनकि म संसारको न्याय गर्न होइन तर संसारलाई बचाउन आएको हुँ। ४८ जसले मेरो वास्ता गर्दैन अनि मेरो वचन स्वीकार्दैन, उसलाई न्याय गर्ने अरू कोही छ। मैले बोलेको वचनले नै अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ; ४९ किनभने मैले आफ्नै तर्फबाट बोलेको छैन तर मेरो बुबा, जसले मलाई पठाउनुभयो, उहाँले नै के भन्ने र के सिकाउने भनी मलाई आज्ञा दिनुभएको छ। ५० साथै, मलाई थाह छ, उहाँको आज्ञाको अर्थ अनन्त जीवन हो। त्यसैले म जे बोल्छु, बुबाले मलाई भन्नुभएअनुसारै बोल्छु।”
^ यूह १२:५ * एक दिनको ज्याला एक दिनार हुन्थ्यो; त्यसैले ३०० दिनार लगभग वर्षदिनको ज्याला हुन्थ्यो।
^ यूह १२:२५ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ यूह १२:४२ * वा, “यहूदी न्यायपरिषद्का सदस्यहरूमध्ये।”